Su'aalaha la isweydiiyo - HONGKONG HUIYUAN International Trade Co., Ltd.
Muunadaha, waqtiga hogaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka baaxadda leh, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood ka dib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaamintu waxay wax ku ool noqdaan marka (1) aan helnay deebaajigaaga, iyo (2) aan u haysanno oggolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii waqtiyada hoggaamineed aysan ku shaqeyn waqtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibintaada. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonaa inaan daboolo baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaan damaanad qaadeynaa alaabtayada iyo farsamada gacanta. Ballan -qaadkayagu waa ku qanacsanaanta alaabtayada. Damaanad -qaadid iyo in kale, waa dhaqanka shirkadeena in wax laga qabto oo la xaliyo dhammaan arrimaha macmiilka si qof walba ugu qanco
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa xirxirida halista khaaska ah alaabada halista ah iyo kuwa xamuulka kaydinta qabow ee la ansixiyey ee alaabada xasaasiga ah. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan kharash dheeraad ah.
Cinwaanka: Qolka 508, dhismaha A, Greenland Central Plaza, Huaiyin kala duwan, Jinan
Gariiradda Sheet Aluminum, Aluminum-Zinc Steel, Gariiradda bireed Aluminum, Dhuxul-Galvanized, Ppgi Ppgl, Dhismaha Profile Aluminium,